DataNumenXubinnimada Ururada Caalamiga ah
Bogga ugu weyn > Xubinnimada Ururada Caalamiga ah
Xubinnimada Ururada Caalamiga ah
DataNumen waxay fiiro gaar ah siisaa sarrifka caalamiga iyo iskaashiga. Waxay leedahay xubno badan iyo iskaashiyo lala yeesho hay'ado qaran iyo kuwa caalami ah oo muhiim ah. Waxaan xiriir gaar ah la leenahay hay'adaha halkan ku taxan, laakiin DataNumen sidoo kale wuxuu ku hawlan yahay hawlo fara badan oo kale iyo iskaashiyo ku saabsan aaladaha softiweerka, isweydaarsiga guud, ka qayb qaadashada deegaanka iyo bulshada.
Ururka Warshadaha Software & Information
Ururka Warshadaha Sooftiweerka & Macluumaadka waa mid ka mid ah most ururada ganacsiga ee muhiimka u ah barnaamijka softiweerka iyo wax soo saarka dhijitaalka ah. SIIA waxay bixisaa adeegyo caalami ah oo ku saabsan xiriirka dowladda, horumarinta ganacsiga, waxbarashada shirkadaha iyo ilaalinta hantida caqliga shirkadaha waaweyn.
Abaabulka Iibiyayaasha Software-ka Madaxa-bannaan
Ururka Iibiyaasha Software-ka Madaxa Banaan (OISV) waa iskaashi ka kooban horumariyeyaasha softiweerka, suuqleyda, qeybiyeyaasha, iyo dukaamada tafaariiq siiya fikradahooda iyo fikradahooda si loo abuuro barnaamij iyo barnaamijyo kafiican qof walba. OISV waxay ku saleysan tahay qiyamka sinnaanta, dimuqraadiyadda, daacadnimada, midnimada iyo ka caawinta dadka kale inay gaaraan himilooyinkooda.
Xirfadlayaasha Warshadaha Software
Xirfadleyda Warshadaha Sooftiweerka waa mid ka mid ah kooxaha adduunka ugu weyn ee matalaya xubnaha warshadaha softiweerka, in ka badan 2400 xubnood oo ka kala socda 93 dal.
Ururka Xirfadlayaasha Warshadaha Sooftiweerka Madaxa Banaan
AISIP waa urur xirfadle ah oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya wershadaha softiweer ee madaxa bannaan. Most Xubnaha AISIP waxay ka iibiyaan barnaamijyada iyo adeegyada boggooda internetka, waxayna ku dadaalaan inay soo bandhigaan alaab qiimo leh, qiimo leh iyagoo dakhli abuuraya.
Iskaashatada Barnaamijka Waxbarashada
ESC (Iskaashatada Software-ka Waxbarashada) waa shirkad aan faa'iido doon ahayn oo isu keenta horumariyayaal, daabacayaal, qaybiyayaal iyo isticmaaleyaasha barnaamijka waxbarashada.
Ururka Caalamiga ah ee Soo Celinta Xogta Xirfadeed
IPDRA (Ururka Soo Celinta Xogta Xirfadleyda Caalamiga ah) waxaa loo aasaasay inay caawiso ururada iyo shaqsiyaadka lahaa lost xogta iyaga oo u tilmaamaya shirkadaha aqoonta u leh aqoonta, khibradda iyo shahaadada leh.